रोनाल्डको ह्याट्रिकले मेस्सीलाइ तनाव ! - Everest Dainik - News from Nepal
रोनाल्डको ह्याट्रिकले मेस्सीलाइ तनाव !
काठमाडौं, असार २ । रुसमा जारी फीफा विश्वकपमा यो शताब्दीकै दुई उत्कृष्ट खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सी यो पटकको विश्वकप जित्ने अन्तिम प्रयासमा छन् ।
दुवै खेलाडी गएको एक दशकदेखि आलोपालो जस्तै गरी वर्ष खेलाडी बन्दै आएका पनि छन् । तर दुःखको कुरा उनीहरुले देशका लागि भने विश्वकप जित्न सकेका छैनन् ।
याे पनि पढ्नुस आर्जेन्टिनाविरुद्ध फ्रान्सको पहिलो गोल
रोनाल्डोले दुई वर्षअघि युरोकपको उपाधि जितेर केही उपलब्धी त हात पारेका छन् तर विश्वकप अझै अपूरो छ । यस्तै मेस्सीले ओलम्पिकमा मेडल बाहेक जित्न सकेका छैनन्, राष्ट्रिय टिमबाट ।
विश्वकप अन्तर्गत क्रिष्टियानो रोनाल्डोले शुक्रबार राति भएको खेलमा ह्याट्रिक गरे । उनकै ह्याट्रिकको सहयोगमा पोर्चुगलले स्पेनलाई ३–३ को बराबरीमा रोक्न सफल भयो ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकपपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै मेसी र रोनाल्डो
अब दबाब अर्का स्टार खेलाडी अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सीमाथि आएको फुटबल पण्डितले बताएका छन् । रोनाल्डोको ह्याट्रिकले अब मेस्सीमाथि दबाब परेको म्याच अफ द डेका फुटबल पण्डित रिओ फरडिनान्डले बताएका हुन् ।
उनले भने,‘रोनाल्डोले जस्तै पूरै टिमको जिम्मेवारी आफूमा लिन सक्ने क्षमता भएका अर्का खेलाडी हुन्, लियोनल मेस्सी । रोनाल्डोको उत्कृष्टताको चाह जहिले पनि चाहेर वा नचाहेर मेस्सीसँग जोडिएको हुन्छ र मेस्सीको रोनाल्डोसँग । अब मेस्सीमाथि दबाब परेको छ ।’
मेस्सीको टिम अर्जेन्टिनाले शनिबार राति पहिलो पटक विश्वकप खेल्न लागेको आइसल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । रोनाल्डोको प्रदर्शन हेरेपछि मेस्सीमा पक्कै दबाब परेको हुनुपर्छ । -देशसञ्चार
ट्याग्स: Leonal Messi, messi, world cup